Koonfurta Hindiya tiyaatarada waa la isku heestaa madaama 5-filim Telugu iyo Tamil isugu jiraan masraxa la isla saarayo – Filimside.net
Koonfurta Hindiya tiyaatarada waa la isku heestaa madaama 5-filim Telugu iyo Tamil isugu jiraan masraxa la isla saarayo
Mudo kadib waa markii ugu horeesay fanka Koonfur Hindiya aan la kala xishoonin sidoo kalena tiyaatarada lagu hardamo madaama laga bilaabo maalinta berito ah ilaa Sabtiga la saari doono 5-filim oo waa weyn oo Telugu iyo Tamil isugu jiraan. Sababta ugu weyn ee masraxa la isugu heesto ayaa ah in feestada Pongal ama Sankranthi qof walbo rabo inuu daawadayaasha mada daaliyo.
Filimada maal mahan masraxa la saarayo dhamaantooda waxaa hogaamiyaal ka ah xidigaha Koonfurta Hindiya ugu awooda badan sidoo kalena lagu kalsoon yahay inay daawadayaasha soo jiidan karaan balse waa qasab in ganacsiga aflaantaan dhuunta is qabtaan.
Fadlan hoos kaga bogo filimada waa weyn ee masraxa la saarayo laga bilaabo maalinta berito ah ilaa sabtiga laga gaarayo macluumaad kooban oo ku saabsan:
NTR Kathanayakudu (9 Jan 2019): Waxaa hogaamiyaal ka ah Nandamuri Balakrishna, Vidya Balan iyo Rana Daggubati, waxaana looga hadlaa nolosha Superstar-kii sanadii 1996 ayuu wadno xanuun u geeriyooday Nandamuri Taraka Ramarao ama loo yaqaan N. T. Rama Rao kaasi oo awoowe u ahaa Jr. NTR.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka weyn NTR Kathanayakudu ee nolosha Super NT Rama Rao looga hadlaayo kaasi oo ay qoyska faraha badan reer NTR ku af tirsadaan:
Viswasam (10 Jan 2019): filimkan Tamil-ka ah waxaa hogaamiyaal ka ah Ajith Kumar iyo Nayanthara. Fadlan goos gooskiisa hoos ka daawo:
Petta (10 Jan 2019): filimkan Tamil-ka ah waxaa hogaamiye ka ah Superstar Rajinikanth sidoo kalena waxaa doorar muhiim ah ku leh Vijay Sethupathi, Simran, Trisha, Sasikumar, Bobby Simha iyo Nawazuddin Siddiqui.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Petta oo siweyn loo wada sugaayo:
Vinaya Vidheya Rama (11 Jan 2019): waxaa hogaamiyaal ka ah Ram Charan, Kiara Advani, iyo Vivek Oberoi fadlan hoos ka daawo goos gooska filimkan Telugu ah:
F2 – Fun and Frustration (12 Jan 2019): waxaa hogaamiyaal ka ah Venkatesh, Varun Tej, Tamannaah Bhatia, Mehreen Pirzada waana filim Telugu ah, fadlan hoos ka daawo goos gooska filimkan:
Haye Aqristayaasheena Qiimaha Badan Reer Koonfur Waa Isku Dhagan Yihiin Maxay Kula Tahay Loolankan Waalida Ah!